रोनाल्डोलाई नयाँ चुनौती, जर्मन लिग जिताउने !! के रोनाल्डो बायर्न जादै छन् ?? - Experience Best News from Nepal
विश्व चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बारे विभिन्न समयमा विभिन्न अफवाहहरु चल्ने गरेको पाइन्छ । विभिन्न फुटबल महोत्सवबाट रोनाल्डो विशिष्ट फुटबलको रोजाईबाट बाहिरिएको भेटिन्छ भने रोनाल्डोले आफ्नो साम्राज्य मानेका सेन्टियागो बर्नाबेउ नयाँ चुनौती स्वरूप छाडेका थिए । युभेन्ट्स प्रस्थान पश्चात धेरै पटकका पहिलो रोजाई मानिने विश्व गरिमा अवार्ड जस्तै यूएफा उत्कृष्ट खेलाडी, बालोन डी’ओए लगाएत अन्य अवार्डबाट वन्चित भएका थिए, अवार्डबाट पछाडी परेका थिए ।
फुटबल समर्थकका निम्ति रोनाल्डो कहिँ कतैबाट प्रेरणाको प्रमुख श्रोत मान्ने गर्छन र मड्रिडको लामो बसाई रोनाल्डोले एकै पलमा छाडे र टुरिन प्रवेश गर्दै नयाँ चुनौतीसंगै सुखद सिजन पार गरे ।
तर बार्सिलोना स्टार लिओनेल मेस्सीसंग रोनाल्डोलाई प्रमुख प्रतिद्वन्दी मानिने गरिन्छ र एक पछी अर्को गर्दै नयाँ चुनौतीको सामना गर्दै आएका रोनाल्डो माथि अर्को अफबाहले फुटबल ट्रान्सफर मार्केट तातिएको छ । रोनाल्डोले अब जर्मन बुन्डेसलिगा जित्ने छन ।
डन बालोनको आजको पहिलो र प्रमुख हेडलाइन बनेको छ, अब रोनाल्डोले चुनौती स्वरूप जर्मन लिग टाइटल जित्ने छन । कुनै समय फ्रान्क रिबरीको बालोन डी’ओर रोनाल्डोले खोसेका थिए अब रिबरीको जर्सी खोस्ने पालो, बालोनको हेडलाइनमा लेखिएको थियो ।
तर सत्यता नरहेता पनि ट्रान्सफर मार्केटमा भने उल्का चर्चामा यो शिर्षक रहेको छ ।